မန်းဂေဇက်မှ မောင်နှမများအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်းဂေဇက်မှ မောင်နှမများအတွက်
Posted by manawphyulay on Jan 19, 2011 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., My Dear Diary, Poetry, Short Story | 17 comments
ဘ၀ရဲ့ ခါးသီးမှုပမာ မနောတို့ ဝေးခဲ့ကြပြီဆိုပါတော့
လူခြေတိတ်တဲ့ ထောင့်လေး တစ်နေရာမှာ
လောကမာယာ အားလုံး ဖြတ်သန်း
မနောရေ ကိုကြောင်ဘိုင်ပြတ်နေလို့ အဲဒါ…
ကိုကြောင်ကြီး ဘိုင်ပြတ်လို့ လည်း ပိုက်ပိုက်မလိုပါဘူး စားစရာအတွက် မပူနဲ့ မနေ့ကမှ ကြွက်ထောက်ခြောက်နဲ့ ဖမ်းထားတဲ့ ကြွက်ပိစိလေး နှစ်ကောင်ရှိတယ် အီးအမ်အက်စ်နဲ့ ပို့လိုက်မယ်… ကိုကြောင်ကြီးဆီလည်း ရောက်ရောကြွက်လည်း အသက်ကြီးရောဆိုတော့ .. အတော်ပဲ အဟဲ
မနောက မန္တလေး ဂေဇက်ကိုကျောခိုင်းသွားခဲ့ပြီ..။ နောက် ဘယ်သူများ သွားဦးမလဲ…..မသိ..။ သြော်……လောက လောက…လောက…။
ဘာလို.ထွက်သွားမှာလဲ ….. ဘာမှလဲအနံ.မရပါလား ….. ကိုကြောင်ကြီး @ ကိုကြီးကြောင် ကူညီပေးပါအုံး ….. ဟီးးးး
ဆိုလိုတဲ့ သဘောက ကိုခိုင်ကို သပိတ်မှောက်လိုက်တာပဲ။ သေသေချာချာ ဆွေးနွှေးကြပါဦး။ တဦးနဲ့ တဦးသေချာ နားလည်သဘောပေါက် ခွင့်လွှတ်စေလိုပါတယ်။ Win-Win situation လုပ်ပေးပါ။ ဒီလိုကိစ္စလေးတွေမှာတောင် ညီညွတ်မှုရှိပါ။ Do and Don’t က comments များ ကြည့်ကြပါ။
ဒီမှာ ၀င်သုံးနေတဲ့ လူတွေက ဒတ်ခနဲဆို ပေါက်ပြီးသားပါ …။ eros ရေ ယူပြောမှပိုဆိုးနေပြီ …
ဟုတ်ပါဒယ် ဦးလေးတို့ အဒေါ်တို့ရယ် အိမ်လခမပေးနိုင်လဲ အတင်းမတောင်းပါဘူး သူဆင်းမယ် ငါဆင်းမလုပ်ကြပါနဲ့ ခလေးတွေမျက်နှာလဲရှိပါသေးတယ် ကြည့်ပါလား အဒေါ်တောင်ကျောမခိုင်းရသေးဘူး အကြီးကောင်လေးဘိုင်ပြတ်နေပီတဲ့ မတွားကြပါနဲ့ဂျာ…………….. :'(
မီတာခပေးစရာမရှိသေးတာရယ်၊ ကြက်သွန်တွေဈေးတက်လာတာရယ်… နောက် စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်တာရယ်……………..
အင်းလေ…….နောက်ဘ၀ကျမှပဲတွေ့ကြတာပေါ့နော် မနောရေ( may she be at rest)ဟက်..ဟက်
နောက်ဘ၀ကျမှ တွေ့မယ်ဆိုတော့ mzm နတ်ပြည်သွားဖို့ ပတ်စပို့စ်ရနေပြီလား?
It’s life, some times somebody make some mistakes.
Really, you didn’t makeabig mistake.
I think they just want to tease you because they know you areayoung fellow.
Hey elder guy, say somethings ( to persuade or soften )
Posted by manawphyulay on Jan 19, 2011 in Creative Writing
သူဖာသူ.. ကဗျာတင်တာ… ဘာတွေကို..ဘာလို့ ၀ိုင်းတားနေကြသလဲကွယ်….။
ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အနှစ်သာရကို ဖတ်တဲ့သူတိုင်း ဘယ်လိုခံစားတတ်သလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ သဂျီးရယ် မရှင်း မရှင်းမလုပ်ပါဘူးနော်…
မမ မနော အဲလို ပဲ မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ …. မီတာခပေးစရာကျန်သေးရင်လည်း နောက်လမှ ပေါင်းပေးလိုက်ပါနော် … ရက်လွန်ကြေးလေး ပေးပီးတော့ ကလေးတွေ ကိုလည်း ဒီလိုပဲ ထားသွားတော့မလို့လား မမ ….
ကျွန်တော.ပို.စ်ထဲက ၇ွာ၇ဲ. အလှဆုံးလေးပဲ ဟာ
ကဗျာလား .. အတည်ပြောတာလား ဆိုတာ ကွဲ ကွဲ ပြား ပြား မသိပါ ..
ကဗျာ ဆိုရင်တော့ မနော သိပ် တော်တယ် .. အားလုံးက အတည်မှတ်နေကြတယ် .. (ဆားပုလင်း နှင်းမောင်လို .. ရှားလော့ဒ်ဟုမ်းလိုပေါ့)
အတည် ဆိုရင်တော့ .. မခံစားနိုင်တော့လို့လား .. စိတ်ရှုပ်လို့လား .. လက်မြှောက် အရှုံးပေးတာလား .. အချိန်မပေးနိုင်တော့လို့လား ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘော်ဒါတစ်ယောက်အတွက် ၀မ်းနည်းတယ်လို့ ဆိုပါရစေ
(မှတ်ချက် ။ ။ ကဗျာပါ ဆိုရင် …………….. ပေးပါနော်)